Vaovao - Huiyu Fluid nanatrika Analytica 2018 Tany Munich Alemana
Huiyu fluid dia nanatrika an'i Analytica 2018 any Munich Alemana. Trano fivarotan'i Huiyu, B1.528-6 #, Paompy tsara kalitao mahavariana mahavariana mpitsidika matihanina an-jatony.
Momba an'i Analytica
Ny analytica mpivarotra varotra manerantany dia nanome toky anao amin'ny fampisehoana mahomby ny teknolojia laboratoara vaovao sy bioteknolojia miorina amin'ny ho avy efa ho 50 taona izao. Io no fanangonana indostria manan-danja indrindra ary manambatra ny lohahevitra rehetra mifandraika amin'ny laboratoara amin'ny fikarohana sy ny indostria.
Fanangonana indostria lehibe indrindra eto an-tany — Fampirantiana iraisam-pirenena
analytica no tsena lehibe indrindra manerantany ho an'ny vokatra sy serivisy miaraka amin'ny rojom-bidy rehetra ho an'ny fizotran'ny laboratoara maoderina. Eo no mivory ireo mpilalao fototra sy mpanapa-kevitra eo amin'ny sehatry ny indostria.
Ireo mpampiranty rehetra an'ny analytica 2020
Sehatra fampirantiana voarafitra — Ilay fiparitahana feno
Ny analytica ihany no manome anao topy maso feno momba ny lohahevitra rehetra mifandraika amin'ny laboratoara amin'ny fikarohana sy ny indostria.
● Fanadihadiana sy fifehezana kalitao
● Bioteknolojia, siansa fiainana ary diagnostika
● Teknolojia laboratoara
Ny fahaizana mifantoka be dia be - Ny valan-dresaka analitista
Ny kaonferansa analytica telo andro dia fo siantifika an'ny analytica. Ireo manampahaizana malaza dia manao tatitra momba ny toetoetran'ny fanavaozana iraisam-pirenena ankehitriny. Tombony amin'ny fifanakalozan-kevitra manentana ny saina amin'ny mpahay siansa fanta-daza manerantany.
Famindrana mivantana fahalalana amin'ny fampiharana - programa an'ny analytica misy hetsika mifandraika amin'izany
● Ny fandaharan'asan'i analytica mifantoka amin'ny fampiharana amin'ny hetsika misy ifandraisany dia mihodina amin'ny famindrana fahalalana, torohevitra tsara indrindra ary ny fifanakalozana hevitra sy fampahalalana mivantana.
● Ny Live Labs dia manolotra teknikan'ny fampiharana sy rafi-pampandrosoana vaovao ao anatin'ny tontolon'ny laboratoara tena mahavariana.
● Araraoty ireo dinika misy lohahevitra manokana hanaovana dinidinika amin'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena sy mpiara-miasa aminao.
● Manatreha ny fampisehoana manokana ataonay momba ny lohahevitra mafana toy ny “Fiarovana ara-pahasalamana / fahasalamana ary fiarovana amin'ny toeram-piasana”.
● Ny fandaharan'asan'ny hetsika mifandraika amin'izany dia voadinadinin'ny andro lohahevitra manokana toy ny "Andron'ny asa an-tsokosoko" sy ny "Andro fitantanam-bola" ary hetsika maro hafa ilaina.